Liverpool Oo ‘Aad U Xiiseeyneeysa’ Renato Sanches – Garsoore Sports
Liverpool Oo ‘Aad…
Liverpool Oo ‘Aad U Xiiseeyneeysa’ Renato Sanches
Kooxda kubbada-cagta ee Liverpool ayaa ‘aad aad ah u xiiseeyneeysa’ iney lasoo wareegto xiddiga xulka Burtuqiiska iyo kooxda Lille ee Renato Sanches suuqa kala iibsiga xagaaga.
Kooxda Liverpool ayaa Sanches u aragta beddelka Georginio Wijnaldum oo ku biiray kooxda PSG, balse loolan adag ayay kala kulmeysaa kooxda Arsenal.
23 jirkan khadka dhexe ayaa si dhow loola xiriinayay Gunners maalmihii ugu dambeeyay isagoo si dadban uga hadlay wararkan la xiriirinaya kooxda kaddib wadahadal bartiisa Instagramka uu kula yeeshay daafaca Arsenal Gabriel Magalhaes.
Haatan, wargeyska L’Equipe ee magaalada Paris kasoo baxa ayaa ku waramaya in Liverpool ay ‘aad u xiiseyneyso’ saxiixa Sanches xagaagan, waxayna doonayaan inay Arsenal kula loolamaan xiddigan, iyadoo kooxda Lille ay diyaar u tahay inay iska iibiso sababo la xiriira dhibaatooyin dhaqaale oo kooxda heysata.
Lille oo hadafkeedu yahay inay ‘yareeyaan liiska diwaankooda’ suuqan kala iibsiga ciyaartooyda, maadaama iyaga iyo kooxo badan oo qaaradda yurub ah ay wali dareemayaan cawaaqib xumada ka imaaneysa coronavirus taasoo dhalisay in kulamada kubbada-cagta lagu cayaaro albaabo xiran.
Laakiin u weecashada Lille ayaa dib u soo nooleysay mustaqbalkiisa ciyaareed, iyadoo xiisaha haatan ka imanay Liverpool ay muujineyso kaliya baahida loo qabo xiddigan kaasoo bandhigyadiisii wacnaa ee xulka Burtuqiiska tartanka Qaramada Yurub uu ku kasbaday booskiisa quluubta taageerayaal dhowr ah, wuxuuna umuuqdaa mid horumar weyn sii sammeeyn doono marka uu u wareego koox weyn.
Renato Sanches ayaa rajeynaya inuu horumariyo waayihiisii liitay ee ugu horreeyay ee Premier League-ga, markii uu u safanayay kooxda Swansea City sannadkii 2018-kii.
Barcelona Oo U Sheegtay Umtiti & Pjanic Inay Bixi Karaan
Kaddib Markii Uu Jawaab Ka Waayay PSG Iyo United , Ronaldo Wuxuu Juve Ka Codsaday Heshiis Cusub